नेचा सल्यान गाउँपालिकामा एमाले विजयी « प्रशासन
नेचा सल्यान गाउँपालिकामा एमाले विजयी
१८ असार २०७४, आइतबार
सोलुखुम्बु । शनिबार राति अबेर गरी सम्पन्न नेचा सल्यान गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेका डुफकुमार बास्तोला विजय हुनु भएका छन् । बास्तोलाले एक हजार ६९८ मतसहित जित हासिल गर्नुभयो भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका धनजन राईले एक हजार ६५६ मत प्राप्त गरे । नेचा सल्यानको उपप्रमुखमा काँगेसका कुमारी घिमिरे दुई हजार दुई मतसहित विजयी भए ।
योसँगै नेकपा एमालेले सोलुखुम्बु जिल्लाको चार स्थानीय तह खुम्बुपासाङ्ग ल्हामु, सोताङ्ग, दूधकोसी तथा नेचा सल्यान गाउँपालिकामा जित दर्ता गराएको छ । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले लिखुपिके तथा महाकुलुङ्ग र काँग्रेसले सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका जितेको छ । अब दूधकौशिका गाउँपालिकाको मात्र नतिजा आउन बाँकी रहेको छ । दूधकौशिका गाउँपालिका प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रको अग्रता कायम रहेको छ । उपप्रमुखमा नेकपा एमाले अग्रस्थानमा देखिएको छ ।
शनिबार आएको मतपरिणामअनुसार दूधकौशिका गाउँपालिका–३ मा नेकाका भूपाल राई, वडा नं. ४ मा नेकाकै नातिकाजी गुरुङ अध्यक्ष सहितको प्यानल विजयी भएको छ । वडा नं. ५ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रेमकुमार राई अध्यक्ष सहितको पूरै प्यानल विजयी भएको छ । अहिले बिहान ७ बजेबाट २, ६ र ७ वडाको मतगणना सुरु भएको छ । रासस
3 December, 2021 1:54 pm
नयाँ दिल्ली । उत्तरी भारतको हरियाणा राज्यमा शुक्रबार भएको सडक
3 December, 2021 1:43 pm
राप्रपाको नयाँ नेतृत्वमा उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र
3 December, 2021 1:34 pm
काठमाडौँ । निर्माण सुरु भएको झन्डै पाँच वर्षपछि गोदावरी सडक
3 December, 2021 1:18 pm
विकास र समृद्धिको नेतृत्व काँग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको